Noqo Habka baakadaha tooska ah ee ugu fiican oo leh soo saaraha soo saaraha iyo warshada |Xingyong
Ku haboonsi loo miisaamo badeecooyinka quraarad ah, jajabka, duuban ama qaabka aan caadiga ahayn sida nacnaca, iniinaha, jelly, shiilan faransiiska, digirta qaxwaha, lawska, cuntada la kariyey, buskudka, shukulaatada, shabaqyada, cuntada xayawaanka, qalabka,
Dhammaystir habka oo dhan quudinta, miisaamidda, iyo soo saarista alaabta la dhammeeyay si toos ah.
Kala duwanaansho codsi ballaaran, oo ku habboon agabyo kala duwan, saxnaanta miisaan culus iyo waxtarka.
Keydso booska iyo kharashaadka maalgashiga.
Gaadhi-qaade u janjeedha silsilad-daabacaadda: loo isticmaalo gudbinta badeecadaha waaweyn;Gaadhi-qaade u janjeedha nooca suunka: loo isticmaalo gudbinta walxaha, budada, iwm.
Hore: Mashiinka leexashada silsiladda
Xiga: Mashiinka baakadaha tooska ah ee burka iyo budada
mashiinka baakadaha si toos ah
Isku darka Miisaanka
qaade u janjeera
miisaanka madaxa badan
Qalabka Baakadaha Cuntada fudud
mashiinka baakadaha toosan
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Gaadhida suunka, Suunka Gudiyaha Korontada, Baakadaha suunka wareejinta, Qaadista suunka tubbada, Gaadhida Skirt Skirt, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Dhammaan Alaabta